1 Korintiana 5, 7b : « Fa voavono Kristy, Paska ho antsika ».
Na ny bokin’ny Asa 10, izay manambara ilay teny soa milaza fiadanana, ary izany teny soa milaza fiadanana izany tsy inona fa Ilay Jesoa Kristy novonoina, maty nefa nitsangana tamin’ny maty. Na ny bokin’ny 1Korintiana 5, izay milaza an’i Kristy maty, Paska ho antsika, ka tokony hanao andro firavoravoana isika. Na ny bokin’ny Lioka 24, izay mitantara ireo mpianatra nankany amin’ny fasana, tsy nahita an’i Jesoa tao am-pasana fa efa nitsangana tamin’ny maty ; na dia tsy nilaza mivantana ny hafalian’ny mpianatra aza i Lioka dia azo ninoana, tamin’ny fihetsik’izy ireo, fa dibon-kafaliana tokoa izy ireo. Raha aravona ny voalazan’ireo texte 3 ireo dia samy mampiseho ny fifalian’ny mpanara-dia ny Tompo noho nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty. Heveriko, ry havana fa mamintina ny perikopantsika androany ity 1 Kor. 5,7b ity : « Fa voavono Kristy, Paska ho antsika ». Fa inona marina moa ry havana ny Paska, ary inona no antony nilazan’i Paoly apostoly eto hoe : « Voavono Krsity, Paska ho antsika » ?
Tsy ho fantantsika feno, ry havana, ny Paska kristiana raha tsy fantantska aloha ny Paska Jiosy. Ny Paska jiosy dia fahatsiarovana ny nanafahan’Andriamanitra ny Zanak’Israely tamin’ny fanandevozana tany Egypta , araka izay hita ao amin’ny bokin’ny Eksodosy 12. Rehefa nandefa ireo loza 9 Andriamanitra, dia mbola nanamafy ny fony i Farao ka tsy nety nandefa ny Zanak’Israely handeha. Nanambara àry ny Tompo fa handefa ny loza fahafolo farany : Handeha hamakivavy an’i Egypta manontolo ny Tompo ka nandringana ny lahimatoa rehetra, na ny lahimatoan’ny olona na ny biby. Mba tsy haharingana ny lahimatoan’ny Zanak’Israely amin’io alina io dia izao no hataony : ny isam-pianakaviana dia samy hamono zanak’ondry tsy misy kilema (izany hoe zanak’ondry salama tsara, tsy mandringa, na poaka ny masony, ha tapaka ny rambony,sns), lahy ary herintaona. Amin’io alina io dia hovonoina izany ondry izany ary hangalana ny rany hatentina amin’ny tolanam-baravarana roa sy ny tataom-baravarana. Atsatsika ny henan’ilay ondry ary hohanina amin’izany alina izany, miaraka amin’ny mofo tsy misy masirasira ( izany hoe mofo tsy misy leviora), hohanina miaraka amin’ny anana mangidy. Tamin’iny alina iny raha nandeha namakivaky an’i Egypta Andriamanitra, izay varavarana rehetra tsy nisy ra, dia ringana avokoa ny lahimatoa tao amin’izany trano izany, fa ny an’ny Zanak’Israely kosa, izay nisy ran’ny zanak’ondry ny varavarana dia tsy voakitikitika ny lahimatoa rehetra. Izany fotoana izany no Pasaka teo amin’ny Jiosy, Paska voalohany. Ary ny teny hoe Paska, amin’ny teny hebreo dia « pessa » avy amin’ny verbe hebreo hoe « Passoha » izay midika hoe : « mandalo ». Ny dikan’ny hoe Paska izany ara-bakiteny dia « Fandalovana » : Andriamanitra nandalo na namakivaky an’i Egypta, ka namono ny lahimatoa rehetra tao amin’ny trano izay tsy nisy ra tamin’ny varavarana. Izany no Paska Jiosy, ary hatramin’izao ry zareo dia mankalaza izany, amin’ny alalan’ny fihinana henan’ny zanak’ondry natsatsika sy fihinana mofo tsy misy leviora. Ny Paska kristiana kosa dia tsy izany : Andro nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Rehefa nosamborina Izy ny Alakamisy alina tao an-tsahan’ny Getsemane, notsaraina ny Zoma maraina, nohombohana teo amin’ny hazo fijaliana iny Zoma iny ihany, maty tamin’iny Zoma iny ihany, talohan’ny filetehan’ny masoandro tamin’ny 6 ora hariva, nalevina tamin’iny Zoma iny ihany. Tao am-pasana Izy nanomboka ny Sabotsy tontolo, ny Alahady maraina vao mangiran-dratsy Izy nitsangana tamin’ny maty. Izany fitsanganan’ny Jesoa Kristy tamin’ny maty izany no Paska ho antsika kristiana. Saika nitovy ny fotoana hankalazan’ny Jiosy sy ny Kristiana ny Paska, satria ny Alakamisy masina no nanorenan’i Jesoa ny Fanasan’ny Tompo talohan’ny nisamborana Azy, Paska Jiosy io alakamisy io. Izany hoe ny fotoana nankalazan’i Jesoa sy ny mpiananany ny Paska Jiosy amin’ny maha Jiosy azy ireo, no nanorenany ny Sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo (Vakio Lioka 22). Izany no mahatonga ny Paska Jiosy sy ny Paska kristiana saika miarakaraka, roa andro no manelanelana azy. Ny Pasaka Jiosy tamin’izany, andro Alakamisy, ary ny Paska kristiana nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty dia andro Alahady.
Araka izany ny Paska Jiosy : nisy ny famonoana ilay zanak’ondry tsy misy kilema, natentina tamin’ny varavarana ny rany, ary tsy tratry ny fandringana ny Jiosy, avy eo dia afaka ny Jiosy, navelan’i Farao hiala tao amin’ny tany nanadevozana. Ary izany ry havana dia tandindon’ny Paska kristiana. Tahaka izany ihany ny Paska kristiana saingy, Jesoa Kristy no zanak’ondry novonoina tao Kalvary teo ambony hazo fijaliana. Ny rany tsy nahosotra tamin’ny varavarana fa raraka teo amin’ny hazo fijaliana ; ary Izy kosa no manafaka ny olona tsy ho andevon’i Satana intsony.
Ry havana malala ao amin’ny Tompo, inona àry no tian’i Paoly apostoly hambara amin’ny hoe : « Fa voavono Kristy, Paska ho antsika » ? Ny Paska Jiosy dia fotoam-panafahana ary fotoam-pandresena. Fotoam-panafahana ny Zanak’Israely andevo tany Egypta nandritra ny 430 taona, fotoam-pandresena : resy Farao sy ny miaramilany ka tsy maintsy nandefa ny Zanak’Israely ho afaka. Fa manoatra lavitra noho izany ny Paska kristiana : fotoam-panafahana ihany koa, saingy nanafahan’Andriamanitra, tsy ny Israely ihany fa ny olombelona rehetra teo ambany fanandevozan’ny satana tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Fotoam-pandresena ihany koa, dia ny nandresena ny fahafatesana ilay fahavalo farany : nitsangana tamin’ny maty Izy. Ary izany no maha fotoam-piravoravoana ny Paska satria nafahana isika, resy ny fahavalontsika. Ary izany no tena fifaliana lehibe indrindra : sady afaka no nandresy. Ary izany no tian’ny Tenin’Andriamanitra hambara eto. « Voavono Kristy, Paska ho antsika » : voavono Kristy fandresena ho antsika, famonjena ho antsika, fifaliana ho antsika. Raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Jesoa Kristy,ry havana, tsy nisy izany fitsanganany tamin’ny maty izany. Raha tsy maty Jesoa tsy nisy izany fifaliana , fandresena na famonjena izany. Tsy maintsy maty aloha Izy, izay vao nitsangana tamin’ny maty. Izao sary izao, ry havana no tsara ho azonareo : tsy maintsy misy aloha ilay fahafatesan’i Kristy, vao misy ilay fitsanganana amin’ny maty, ilay Paska io, vao misy ilay fifaliana (FAHAFATESANA , FITSANAGANANA, FIFALIANA). Raha vao tsy nisy ilay fahafatesana dia tsy nisy ireo roa farany (Fitsanganana, sy fifaliana). Izay no mahatonga an’i Paoly eto milaza hoe : « Voavono Kristy, Paska ho antsika ». Voavono aloha Kristy, maty aloha Kristy, izay vao nisy ilay Paska, Izay vao nisy ilay fifaliana.
Andeha haka ohatra isika mba hampahazava azy. Andeha atao hoe manana ekipa mpanao baolina kitra isika ato amin’ny FPMA Aix-Marseille. Dia tampotampoka eo, iny ilay ekipa mpanao baolin’ny FPMA fa nandeha minibus, mamakivaky ny tanànan’ny Marseille mihorakoraka : «ô ! ô !ô !… »). Dia anontanian’ny olona : taiza ianareo no nanao baolina, nifandona tamin’iza ary naharesy firy sy firy ? Dia hoy ny valiteny hoe : An ! An !, tsy taiza tsy taiza izahay, tsy nifandona tamin’iza na tamin’iza, fa naharesy fotsiny, dia faly. Dia holazain’ny olona amin’izay fotoana izay hoe efa misy fahavoazana, misy voa kely ny sainy.
Tahaka an’izany koa : andeha ataontsika hoe tsy maty Jesoa. Dia iny isika hitory amin’ny olona hoe : ny Jesosinay dia mahery fa naharesy ny fahafatesana. Dia hanontany ny olona hoe taiza ny Jesosinareo no nandresy ny fahafatesana ? Dia hoy isika hoe : nandresy ny fahafatesana fotsiny Izy kah !. Dia holazain’ny olona fa ho adala isika kristiana raha izany. Ry havana malala ao amin’ny Tompo, tsy nanao an’izao fankalazana ny Paska izao isika, raha tsy maty aloha Kristy ; tsy nifaly tahaka izao isika raha tsy maty aloha Kristy. Fa voavono aloha Kristy vao nisy ny Paska ho antsika. Tsy maintsy nandalo fijaliana, nandalo fahafatesana aloha ny Tompo, mba hanaporofoan’Andriamanitra fa mahery Izy, mandresy ny fahafatesana, tsy mahatazona azy ny fahafatesana ; ary izany dia mba hanamafy orina ny finoan’ny kristiana sy hanany fifaliana.
Ry rahalahy sy anabavy ao amin’ny Tompo, hafatra telo no tian’ny Tompo ampitaina amintsika avy amin’izany Tenin’Andriamanitra izany. Ny hafatra voalohany dia izao : ny tena fiafaliana, fifaliana anaty fa tsy ivelambelany, fifaliana maharitra fa tsy fifaliana mandalo, dia tsy maintsy miainga amin’ny zavatra mafy, tsy maintsy miatomboka amin’ny fitsapana, fiaretana, tahaka ny fifalian’ny Paska niainga tamin’ny fijaliana sy fahafatesan’i Kristy. Jereo ny fifalian’ny mpianatra afa-panadinana. Fa mialohan’iny fifaliana iny tsy maintsy nisy fiaretana tao : miaritory mianatra, mifoha maraina be, miaritra hatsiaka, sns. Jereo ny fifalian’ny atleta anakiray nahazo medaly volamena. Mialohan’ny nahazoany medaly volamena, dia tsy maintsy nisy fiaretana tao : entrainement mafy, sy henjana, nisy fifehezan-tena maharitra. Koa ho anao izay ao anatin’ny fitsapana mahamay , fahoriana, zava-tsarotra ankehitriny, dia izao no tsarovy : nataon’Andriamanitra izany mba hanomanana anao ho amin’ilay fifaliana lehibe sy maharitra any aoriana any, ary indrindra hanomanana anao ho amin’ny fifaliam-ben’ny lanitra. Raha misy olona roa samy narary : ny anankiray naratra kely fotsiny ny tanany, ny anankiray jamba nandritra ny 10 taona. Samy nositranin’ny Tompo izy ireo. Iza no faly indrindra amin’ireo olona roa samy narary ka nositranina ireo ? Tsy isalasana fa ilay jamba no tena faly tsy misy toy izany, ary tsaroany mandra-pahafatiny izay nataon’ny Tompo taminy. Misaora an’Andriamanitra ry havana raha omeny fitsapana mafy ianao ankehitriny, satria tiany homena fifaliana ary ny tena fifaliana ianao aoriana ao, tiany homena fifaliana maharitra. Fa maty aloha Kristy, vao nisy ny Pasaka, ilay fifaliana lehibe.
Ny hafatra faharoa, raha ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no anton’ny fetin’ny Paska, ny tokony hataon’ny olona voalohany indrindra amin’ny Paska dia ny mandeha midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra any am-piangonana, misaotra an’Andriamanitra. Tsy nisy izany Paska izany raha tsy nitsangana i Jesoa. Nefa dia ilay fototry ny Paska indray no hadino rehefa Paska, fa lasa ny olona miala voly, mijery Cinema, mihinan-kanina. Izany no Paska amin’ny olona maro. Nisy mpitory teny anankiray izy raha nitory ity teny ity izy dia hoy izy : Ny teny hotoriako, ry havana dia teny efa mahazatra antsika ihany, voasoratra ao amin’ny 1 Kor. 5,7 ary somary hovaiko kely hanaraka ny toetr’andro mba hieritreretako sy hieritreretanao ny famaky azy, toy izao ny famakiako azy : Fa voavono ny vorombe hanaovantsika Paska ! Ry havana dia ho vitan’ny vorombe ve ny antsika ny Paska. Sanatria anie izany ry havana. Tsy ho fety sy lanonana ara-nofo akory ny Paska fa fifaliana noho ny fandresen’i Kristy ny fahafatesana ka hanomezam- boninahitra Azy aty am-piangonana.
Ny hafatra fahatelo farany dia izao, ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra velona, noho izany dia azontsika hiresahana sy hamborahantsika ny manahirana antsika rehetra ; fantany, hitany, reny, tsapany ny mitranga rehetra eo amin’ny fianinantsika, na inona na inona. Nahoana isika no malahelo lava, mitanondri-dava, nahoana isika no matahotra foana eo ami’ny fiainan-tsika, nahoana isika no manahy ny amin’ny ampitso ? Nahoana no tsy resahantsika amin’Andriamanitra ny olantsika fa tehirizintsika manokana ho antsika. Ohatry ny misalasala isika fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika, eo anilantsika mandrakariva, azo iresahana, angatahana, afaka manampy, mamonjy.
Indray mandeha, ry havana, i Lotera ilay mpanitsy fivavahana, rehefa niezaka araka izay azony natao izy tamin’izany fanitsiam-pivavahana izany, nefa dia fanenjehana, fifofoana ny ainy aza no nitranga, dia kivy izy. Nihidy aman-trano irery tao izy, tsy nety nihinan-kanina sy nisotro rano. Nandeha ny andro maromaro, niezaka nandresy lahatra azy ny vadiny mba hihinan-kanina izy fa tsy naharesy lahatra azy. Resin’ny fahakiviana tanteraka i Lotera. Indray andro nandondona tao amin’ny efitrano nisy an’i Lotera ny vadiny, nanao ankanjo mainty fisaonana. Taitra be i Lotera nahita ny vadiny misaona manao ankanjo mainty. Fa iza no maty hoy izy no misaona tahaka an’io ianao. Dia hoy ny vadin’i Lotera : Maty Andriamanitra dia izany no mahatonga ahy hisaona. Ianao angaha adala, hoy Lotera ? Aiza no hisy Andriamanitra maty. Sao dia efa misy voa kely ny sainao. Dia hoy ny vadiny : raha tsy maty Andriamanitra , nahoana no manao an’izao ianao : tsy mety mihinan-kanina, mamoifo, very fanantenana. Matoa ianao manao an’izao dia satria maty Andriamanitra. Tsy misy azo antenaina intsony. Nanomboka tamin’izay tenin’ny vadin’i Lotera izay no nahatonga saina an’i Lotera. Raha velona tokoa Andriamanitra, nahoana aho no mamoy fo, nahoana aho no kivy, very fanantenana, hoy izy. Tsia hoy izy tsy maty Andriamanitra, velona ny Andriamanitra hivavahako. Nitsangana i Lotera, niala tao amin’ilay efitra, lasa nisakafo izy, ary nanohy indray tamin-kery sy hafanam-po ny fanitsiam-pivavahana nataony. Ry, havana, matetika tokoa ny fihetsika asehontsika dia mitory fa maty ny Andriamanitra hivavahantsika. Paska anio, ry havana. Te hampahatsiaro antsika indray ny Tompo fa velona Izy, velona Jesoa, nitsangana tamin’ny maty. Fifaliana ho antsika izany. « Fa voavono Krsity, Paska ho antsika ». Paska : fetim-pifaliana ho an’ny olona rehetra. Fa velona Jesoa.